ko htike's prosaic collection: August 2008
နအဖနှင့် ဝန်ထမ်း တချို့၏ အကျင့်ပျက်သမျှ
Posted by ကိုထိုက် at 22:479comments
Labels: ပြန်လည် ဖြန့်ဝေခြင်း
2 demonstrations in UK at Junta's embassy and Singapore embassy (Next Stop - Thai Embassy soon)
At Junta's embassy
At Singapore embassy
Slogan For Singapore embassy,
Two face Singapore government ...... Shame on you
Renew the Burment Students visa in Singapore ......... Right now
Burma cause of democracy movement ........ Respect Respect
support the people not the Dictators ....... Right now
Posted by ကိုထိုက် at 09:33 29 comments
Labels: မြန်မာ့နိုင်ငံရေး, သတင်း ဓါတ်ပုံ
နောက်ဆုံးရသတင်း (သို့)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူမ၏ တောင်းဆိုချက် (၂) ချက်
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ် (၂) ပတ်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စားသောက်ရေးကို တာဝန်ယူပို့ဆောင်ရသော ကိုမြင့်စိုးအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၊ သူမ တောင်းဆိုသော အချက် (၂) ချက်ကို နအဖ အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိပါက ကိုမြင့်စိုးအနေဖြင့် တံခါး လာခေါက်စရာ နောက်ထပ် မလိုတော့ဘူးဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
အဆိုပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တောင်းဆိုချက် (၂) ချက်မှာ
၁။ အင်တာနက် တပ်ဆင် အသုံးပြုခွင့်နှင့်
၂။ ဆရာဝန် ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း၊ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်း တို့ဖြင့် တွေ့ဆုံခွင့် စသည့် အချက် (၂) ချက်ကို တောင်းဆိုထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နောက်ထပ် သိရသော အချက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်မှု ကိစ္စများကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေသော ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနှင့် အခြားအဖေါ်၏ လွတ်လပ်ခွင့်များကိုလည်း နအဖ အနေဖြင့် အခုနောက်ပိုင်းရက်များတွင် ချုပ်ခြယ်မှု ပိုမို များပြားလားခြင်း ခံရသည့် အချက်အပေါ်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေဖြင့် ကျေနပ်နှစ်သက်ခြင်းမရှိ ဟူ၍လည်း သိရပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တောင်းဆိုချက် (၂) ချက်တွင် ဒုတိယ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်သော ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းနှင့် ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်း တို့ဖြင့် တွေ့ဆုံခွင့်ကို လိုက်လျောပေးလိုက်သော်လည်း ပထမ အချက်ဖြစ်သည့် အင်တာနက် တပ်ဆင် အသုံးပြုခွင့်ကို ခွင့်မပြုသေးသောကြောင့် (၇) ရက်လျှင် တစ်ခါ ပေးပို့ရသော အစားအသောက်များကို လက်ခံရမည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၂) နေ့တွင် အစားအသောက်များကို ပို့ပေးနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဒီနေ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့သည် နောက်ထပ် (၇) ရက် မြောက်သော နေ့ဖြစ်သောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် အစားအသောက်များကို လက်မခံဘဲ ငြင်းဆိုထားသည်မှာ (၂)ပတ်တိတိ ပြည့်မြောက်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် အစာအငတ်ခံ ဆန္ဒပြ၊ မပြဆိုတာကို သေချာ မသိနိုင်သေးသော်လည်း အစားအသောက် ပေးပို့ခြင်းကို လက်မခံသည်မှာ (၂) ပတ်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 23:13 11 comments
ANTI-DICTATORSHIP PEOPLES・ FREEDOM MOVEMENT
We are going to stageaprotest against the Thai Embassy in Washington DC denouncing the Thai Prime Minister・s remark against our beloved leader andaNobel Peace Laureate. His remark is slimy, sleazy, irresponsible, unwise and stupid forastatesman.
Samak made the controversial comment; we quote, to UN envoy Ibrahim Gambari when the two met in Bangkok as the Nigerian diplomat was returning from his latest failed mission to Burma. ・Europe uses Aung San Suu Kyi asapolitical tool. If it's not related to Aung San Suu Kyi, you can have deeper discussions with Myanmar [Burma].・
We also would like to urge the activists around the world to stageaprotest against the Thai PM in front of the Thai Embassies around the globe. Also, please demand the UNSC to dismiss Gambari form his post by protesting at the UN offices around the world.
Remember, our job as non-violent activists is to let the world know that the atrocities and social injustices are still going on in Burma, and that is why we keep on doing what we suppose to. Media cooperation and sympathy of our honest and noble struggles are greatly appreciated.
"LONG LIVES DAW AUNG SAN SUU KYI." "DOWN WITH MURDEROUS DICTATORS IN BURMA"
Venue: Royal Thai Embassy
1024 Wisconsin Ave Nw, #303, Washington DC
Date: August 29, 2008 (Friday)
Ko Yin Aye : 301-905-7591
Ko Saw Maung Naing : 301-917-7728
Ko Arkar Soe : 301-213-0605
U Tin Maung Thaw : 703-980-8083
Shwe Htee : 571-235-4035
Posted by ကိုထိုက် at 20:41 10 comments
Posted by ကိုထိုက် at 02:18 10 comments
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ချုပ်နေ့
Posted by ကိုထိုက် at 23:51 8 comments
Labels: ပိူစတာ, အမှတ်တရ
လန်ဒန်မြို့ မြန်မာသံရုံးနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ သံရုံးတို့တွင် သောကြာနေ့ ၂၉ ရက် သြဂုတ်လတွင် ဆန္ဒပြပွဲများပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သဖြင့် လာရောက်ပူပေါင်း ပါဝင် ကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျင်းပမည့် အချိန်နှင့် နေရာများ
၁၃း၀၀ မှ ၁၄း၀၀ အထိ မြန်မာသံရုံး
၁၅း၀၀ မှ ၁၆း၀၀ အထိ စင်္ကာပူသံရုံး
KNO-UK မှ စစ်အာရှင်များ၏ မတရားဖိနှိပ်မှုများကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒပြရန် အတွက် နေ့လည် ၁ နာရီ မှ ၂ နာရီတွင် မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒဖေါ်ထုတ် ပြသရန်နှင့်
U2V မှ စင်္ကာပူ အစိုးရ၏ မြန်မာကျောင်းသားများ အပေါ် အကြောင်းမဲ့ နှင်ထုတ်၊ ဗီဇာ သက်တမ်း တိုးမပေးသည့်အပေါ်တွင် ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်ပွဲကို နေ့လည် ၃ နာရီမှာ ၄ နာရီ အထိ စင်္ကာပူ သံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြသရန် ဖိတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
KNO & U2V
Posted by ကိုထိုက် at 16:136comments
Invitation for demostrations
In UK, we will have2demostrations on the 29 of August (Friday) 2008. First one will be at the front of Burmese Embassy and Second one will be at the front of Singapore Embassy.
13:00 to 14:00 at the front of Burmese Embassy Map here
15:00 to 16:00 at the front of Singapore Embassy Map here
The first one is organized by KNO, detail are,
We, the Kachin National Organisations from India, Japan, Denmark and UK will hold demonstration in front of Burmese Embassies
-to show solidarity to Nhkum Hkawn Din's family ( 15) who was the victim of sexual violence and brutal murdered by SPDC soldiers
- to stop Human rights abuses and systematic genocide of ethnic nationalities in Burma
- to demand Senior General Than Shwe to appologize on State TV for such barbarian acts.
- to gain Genuine Federal Democratic Union
You are invited to join the demonstration. The programme as follows:
1. India - August 27, 11:00am to 12:30 pm, contact no. 0091 9810123374, 0091 9854361177, 0091 9999137828
2. Japan- August 27, 3:00pm to 4:00pm, Contact no. Peter Brang Seng: 0081 9041306401, 0081 8035990719
3. Denmark - August 27, To distribute leaflet on human right abuses on the trains.
4. UK- August 29, 1:00pm to 2:00pm, contact no. Lashi Gun Tawng: 0044 7882207225
Place; 19 A Charles Street,London W1J 5DX .... Map here
The second one is Organized by U2V group, and the reason is
The Burmese in Singapore have organised "more than dozen" events in the last few months, from the march along Orchard and Tanglin Roads during the Asean summit held in Singapore last November, to petition signing against the sham referendum, to prayer vigils for those slain in the streets of Rangoon. All have been peaceful, but they have also beenareflection of the deep anger felt by Burmese over the vileness of the military regime.
After those things happen, now six Burmese who actively organize for those peaceful movements, have been thrown out of Singapore in the last month or so when their residency passes were denied renewals. While the immigration office has not provided any explanation for any of these cases.
Now we are going to ask to singapore embassy in uk for;
-to stop Human rights abuses on burmese people in Singapore by singapore government
-to stop supporting to the burmese junta
That's why, We invite you to join our demostration outside the singapore embassy to show our solidarity for our Burmese students in Singapore.
Time 15:00 to 16:00 at the front of Singapore Embassy
address9Wilton Crescent, Belgravia, London SW1X 8SP .. MAP
Posted by ကိုထိုက် at 15:006comments
Future New Generation Students
Posted by ကိုထိုက် at 14:345comments
Posted by ကိုထိုက် at 18:04 10 comments
Posted by ကိုထိုက် at 16:426comments
Labels: စိတ်ဓါတ်ရေးရာ, မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
စစ်အစိုးရရဲ့ အထူးအခိုင်းခံပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် အ(ဒ်)ဘူလာ ဂမ်ဘာရီသို့ ပန်ကြားချက်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ၊ အ(ဒ်)ဘူလာ ၊ ဂမ်ဘာရီရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့(၆)ရက်ကြာခရီးစဉ်ဟာ ၂၃ . ၈ . ၂၀၀၈ (စနေနေ့)မှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ် ။မြန်မာလူထု တစ်ခဲနက်ထောက်ခံအားပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)” နှင့် လက်နက်အားကိုးနဲ့ မတရားအာဏာယူထားတဲ့ စစ်အစိုးရတို့အကြား “နိုင်ငံရေးအရ တင်းမာမှုတွေကို ပြေလည်အောင်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးရန်” ဆိုတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တာဝန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ(၆) ကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပါတယ် ။
မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ ရဲ့ ခရီးစဉ်တိုင်း စစ်အစိုးရရဲ့ အလိုကျစီစဉ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ၊ လွပ်လပ်စွာ သွားရောက်နိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး ။ အဲ့ဒါကိုလည်း မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ မိမိအနေနဲ့ မိမိအစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခွင့်ရရန်တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဟု ၊ ယူဆရပါတယ်။ စစ်အစိုးရက တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့သာ တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိခဲ့တာ တစ်နိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေ အသိဆုံးပါ ။ ဒါကိုလည်း မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီက ၀မ်းသာအားရ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာပါဘဲ ။ ငြင်းပယ်ခြင်းမရှိသလို ၊ အမှန်တကယ်တွေ့ဆုံသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့ တွေ့ဆုံရန် မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး ။
စစ်အစိုးရရဲ့ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတွေကိုကြည့်ရင် အစဉ်အမြဲ စစ်အစိုးရပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အထူးခင်မင်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံလေ့ရှိပြီး စစ်အစိုးရရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့သာ ညစာစားပွဲ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ် ။ အတိုက်အခံပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်နိုင်ရန် လုံးဝတောင်းဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ ညစဉ်ညတိုင်း မြရိပ်ညိုရွိုင်ရယ်ဟိုတယ်မှာ ၊ အနှိပ်ခံခဲ့တယ်လို့ လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူအချို့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ မြရိပ်ညိုရွိုင်ရယ်ဟိုတယ်မှာ အချိန်ပေး ၊ ထမင်းစား ၊ အနှိပ်ခံ ဇိမ်ယူနေပြီး အမှန်တကယ် တာဝန်အရ အချိန်ပေးတွေ့ဆုံရမယ့် NLD အပါအ၀င် ၊ တိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီပါတီ အဖွဲ့အစည်းတွေ ၊ တွေ့ဖို့ကျတော့ အချိန်မရှိလို့ (၁၀) မိနစ်ဘဲလက်ခံတွေ့တာဟာ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့သိက္ခာမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ ။ ကမ္ဘာကထည့်ဝင်ထားတဲ့ UN ကငွေကြေးတွေ (လစာအပါအ၀င်)ကို မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးဖြုံးပစ်နေတာဟာ ၊ ကမ္ဘာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ စော်ကားနေတာပါ ။
ခရီးစဉ်တိုင်းမှာ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ၊ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ ယခု နောက်ဆုံးအကြိမ်မှာတော့ “ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ” နဲ့ မတွေ့ဆုံခဲ့ရပါဘူး ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အတွေ့မခံတဲ့အကြောင်းရင်းကို အခုအချိန်ထိ မည်သူမှ မသိရှိနိုင်သေးပါဘူး ။ ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ လမ်းပြမြေပုံ (Road Map) ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့လို့ရယ် ၊ မိမိရဲ့ မူလတာဝန်ကနေ သွေဖီပြီး စစ်အစိုးရအလိုကျ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာရယ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ထူးခြားတာကတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားက မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ စစ်အစိုးရကလူတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိမ်ရှေ့ကနေ လော်စပီကာတွေနဲ့ အော်ဟစ်ခေါ်ဆိုနေပုံတွေကို ပြသတာပါဘဲ ။
စစ်အစိုးရရဲ့ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှန်တကယ်တွေ့ဆုံလိုတယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်မှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဂါရ၀ပြုခွင့်ကို စစ်အစိုးရထံ မတောင်းဆိုခဲ့တာလဲ ။ အလားတူ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ ကို လက်ခံတွေ့ဆုံမှုမရှိတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ(ယိုင်ယိုင်)ရဲ့ အိမ်ရှေ့ကိုရော ဘာဖြစ်လို့ လော်စပီကာနဲ့ သွားမအော်ကြတာလဲ ။ (သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရမှာ သိနေလို့လား ။ )
မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ ရဲ့ အဆင့်ဟာ ၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (သံတမန်) တစ်ဦးသာဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ သဘောပေါက်မှာပါ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်မှာ သွားရောက်တွေ့ခွင့် တောင်းဆိုခြင်းဟာ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ အတွက် သေးသိမ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ။ ကမ္ဘာက လေးစားရတဲ့ နိုဘယ်(လ်)ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ အိမ်မှာ တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဟာ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ အတွက် အထူးဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ကိစ္စကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ ။
ရဟန်းသံဃာ ၊ ကျောင်းသူ/သား ၊ လူငယ်လူရွယ်လူကြီးမကျန် ၊ ပြည်သူလူထုကို အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ပြီး မတရားအာဏာကိုရယူထားတဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့ သူတို့ရဲ့လက်ဝေခံ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း လူလိမ်လူညာတွေနဲ့သာ ဆက်လက်တွေ့ဆုံပျော်ပါးနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ထပ်မလာပါနဲ့တော့လို့ မြန်မာလူထုကိုယ်စား တောင်းဆိုလိုပါတယ် ။မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ အနေနဲ့ မိမိနိုင်ငံ (နိုက်ဂျီးရီးယား) မှာ လာဘ်စားတာ အားမရလို့ စစ်အစိုးရရဲ့ ပေးစာကမ်းစာတွေရဖို့ မျက်နှာချိုသွေးနေရတာ ၊ ၀င်ခွင့်မရမှာကြောက်လို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဆန်း (ဟာသကျော်ဆန်း) ရဲ့ တံတွေးခွက်ထဲမှာ မျက်နှာအပ်တောင်းပန်နေရတာဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေပါတယ် ။ ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့တောင်ကောင်းပါတယ် ။
စစ်အစိုးရနဲ့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ တို့ ပူးပေါင်းပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အပြစ်ဖြစ်အောင် ပညာသားပါပါ ဖန်တီးဆောင်ရွက်နေတာတွေကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေက ကောင်းကောင်းနားလည်ကြပါတယ် ။ မြန်မာလူထုဟာ ဦးနှောက်ကောင်းကြပါတယ် ။ စစ်အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများလို ကျပ်မပြည့်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ သိထားသင့်ပါတယ် ။ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ၊ (ခင်ဗျား)အရင်ရှေ့က အာပေါင်အာရင်းသန်သန်ပြောခဲ့ကြတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေ စစ်အစိုးရနဲ့ အပေါင်းအသင်းလုပ်မှုကြောင့် ၊ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုဇာတ်သိမ်းခဲ့သလဲဆိုတာ သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းကြည့်စေချင်ပါတယ် ။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး စစ်အစိုးရရဲ့ ခိုင်းစေမှုတွေသာ ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ထပ်မလာပါနဲ့တော့လို့ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ ကို ထပ်မံပန်ကြားလိုက်ပါတယ် ။
Mr. Ibrahim Agboola Gambari
Entreaty to Mr. Ibrahim Agboola Gambari (Special Slavish Servant of Burmese Military Junta)
So call special envoy from United Nation Secretary General, Mr. Ibrahim Agboola Gambari completed his (6) days trip to Burma on Saturday, 23.08.2008.This isa6th trip for him and purpose of his mission was to negotiate between Military Junta and National League for Democracy (NLD) to resolve the political tension and reconciliation. NLD won the landslide election held by Junta but latter refuse to hand over the power to NLD. Most of the NLD party members were arrested, tortured and even murdered by Junta.
Each and every of Mr. Gambari’s trips and itineraries are entirely arrange by Military Junta and he has no freedom to go wherever he wants but we never heard of his objection to that restriction.
Mr. Gambari only get the chance to see the person if Junta arrange/allow for him and all entire nation know that he is gladly followed everything arrange by Junta. He never refuses the arrangement and never tries to request for the meeting which really necessary.
All entire nation watch in the Junta’s own news paper and television media as they can always see Mr. Gambari enjoy the accompany of Generals and having enjoy together with them in Banquet Dinner. We never heard of Mr. Gambari requesting any opposition party members to attend in that event or arrange to meet and havingachance to talk and dine with them. We learnt from some security personnel that he can spare his time to have massage session in Mya Yeik Nyo Royal Hotel every night. He can spend the extra time for own relaxation such as massage, manicure and other personal satisfaction but his main task of meeting with NLD and other Ethnic Organization, he can only spare 10 minutes for them. That is the most dishonorable behavior of Mr. Gambari’s and we feel insulted to our entire Nation and people. He is wasting the money of United Nation and in other mean he is wasting the money of the world people’s distribution. He is insulting the people of the world too.
He can never achieve any positive result in all his trips to Burma. Only result is that he praises the Junta’s7steps Road Map as that is totally unacceptable by Burmese people. Probably, Daw Aung San Su Kyi refusal to meet him is mostly because of that. Moreover, Mr. Gambari is very obviously doing all the jobs for Junta and Burmese people consider him as Junta’s slavish servant.
The funniest thing we can see in this trip was that Mr. Gambari’s entourages and Junta’s subordinates were shouting with portable Loudspeaker in front of Daw Aung San Su Kyi house. State run Medias want to accuse that they call Daw Aung San Su Kyi in that way but she was not turn up.
Daw Aung San Su Kyi was in under house arrest for more than five years without trial and her house, her compound and surrounding area including all adjacent roads were segregated and restricted. No one except authority and security personnel can enter that area. They can go into her house anytime and that is daily and normal practice for the authorities to do so. Why can’t they go in? Why Mr. Gambari did not wants to go in? Why they want to make that comical show? She’s not free person to come out from her house. Junta leader Senior General Than Shwe also refuses to meet Mr. Gambari and why didn’t he go in front of Than Shwe house with Loudspeaker and shout? He knows that he will get bullets instead of meeting.
Mr. Gambari’s position is onlyaspecial envoy from United Nation Secretary General and we consider him as normal diplomat. Not more than that but Daw Aung San Su Kyi isaleader of Burmese people so we believe if Mr. Gambari go to her house and arrange for meeting is notadishonorable subject for him. Mr. Gambari can be proud of going to Noble peace prize laureate house for meeting especially she is under unlawful suppression and house arrest.
Mr. Gambari is enjoying with Junta’s entertainments and neglecting the desire of entire nation and people. Junta and Generals are criminals and innocent people of Burma were tortured, murdered and threaten by them. If Mr. Gambari is enjoying associating with them, then the best for you is not to come back to Burma. Your task and your work are contrary and we feel betrayed.
This isashame for United Nation as one of their top diplomats was shamelessly associated with the world most corrupted and murderous criminals. He can’t save his own face in front of Generals when he was insulted by Brigadier General Kyaw San but he is immediately tamed after that. Probably Kyaw San did some under table negotiation to close Mr. Gambari’s mouth and recruited as their most loyal servant.
The last act of Loudspeaker conspiracy in front of Daw Aung San Su Kyi house was intentional set up collaborated together by Junta’s Generals and Mr. Gambari. But let us warn to Mr. Gambari that Burmese people are not stupid and have considerable brain with them. We are not like brainless Generals. All of Mr. Gambari’s predecessors were end up in the dishonorable results due to corruption and close association with Junta. We hope you are better at beginning but all the same at the end.
We again, hereby request you not to come back to Burma as if you are obeying the order of Junta and breaching the duty of United Nation that Burmese people are not in trust with you anymore.
Posted by ကိုထိုက် at 15:466comments
Labels: ဂမ်ဘာရီ, ပြန်လည် ဖြန့်ဝေခြင်း, မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
Posted by ကိုထိုက် at 11:185comments
Information Release: August 26, 2008, Political Prisoners' Lives Endangered By Neglect. - AAPP's Health Report Annex.
Information Release - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: Information Release
Posted by ကိုထိုက် at 11:105comments
Thai PM Says West Uses Myanmar's Suu Kyi As Political Tool
Click here to Read what did he say.
Is he Nut? How come outsider can use Daw Aung San Suu Kyi as Political tool?
In reallity, he has been used as Political tool by Junta.
Since she has been detain, Daw Aung San Suu Kyi never meet with outsider apart from that so call UN envoy whilst Mr Samak Sundaravej worshipafew times to junta.
Who is the actual tool?
Posted by ကိုထိုက် at 13:066comments
Labels: စိတ်ဓါတ်ရေးရာ, သတင်း ဓါတ်ပုံ
ကျွန်တော် ဘလော့ စ ရေးကာစ နဂိုရေးပြီးသား ဘလော့ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ရှိပြီးသား လူတွေဆီ အလည်သွားရ၊ ရေးတာတွေ ဖတ်ရ၊ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် cbox တို့၊ comment တို့မှာ နှုတ်ဆက်ရ၊ အချင်းချင်း အားပေးကြနှင့် တမျိုး ပျော်စရာ ကောင်းသေး၏။ အဲဒါ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်လယ်ပိုင်း ဇွန်၊ ဂျူလိုင် လ များရဲ့ အချိန်တွေ။
နိုင်ငံရေး ရေချိန်၊ .... ဟုတ်ပဗျာ။ ဘာကောင်းသလဲ မမေးနဲ့။ ၈၈ မျိုးဆက်များရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို နားထောင်ရ၊ လေ့လာရ၊ သတင်းတွေ အားရပါးရ နားထောင်ရနဲ့ တော်တော်လေး စိတ်လှုပ်ရှားမိပါရဲ့။ (၂၀၀၇) ခုနှစ် နှစ်စပိုင်းလောက် မှာ ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအဝင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် (၅) ယောက်ကို ဘာမှန်း မသိ၊ ခဏ ဆိုပြီး ခေါ်သွားတာ ရက်တွေကျော်၊ လတွေ ကူးနဲ့၊ ထုံးစံ အတိုင်း လုပ်နေတာကိုများ ... ကျန်ခဲ့တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေက statements လေးတွေ ထုတ်ပြီး ငြိမ်မနေ။ အထူးသဖြင့် ကိုကျော်မင်းယု (ကိုဂျင်မီ)၊ ကိုမြအေးတို့ ဦးဆောင်ပြီး ထိရောက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ တိုက်ပွဲဝင်ပုံစံ ဖော်ထုတ်မှုတွေ ...။ အားပါး ... လက်ဖျားခါလောက်ရဲ့။
အဖြူရောင် ဝတ်ဆင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု ...။ လက်မှတ်စုဆောင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ...။ ရင်ဖွင့်သံ လှုပ်ရှားမှု ... ။ အဲ .. တပြိုင်နက်ထဲမှာပါပဲ ... အမျိုးသမီးတွေကလည်း အန်တီစု မလွတ်မချင်း အင်္ဂါနေ့တိုင်း ဘုရားတတ် ဆုတောင်းပွဲတဲ့။ မနီလာသိန်းကလည်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသူတွေကို စုစည်းလို့ပေါ့။
အဲဒီမှာပါပဲ ..။ လူ့အခွင့်အရေး (ကိုယ့်အခွင့်အရေးဆိုတာ) ဆိုတာ သူများက ပေးတာ မဟုတ်ဘူး၊ အစိုးရ တရပ်က ပေးရတာ မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ဘာသာ ထုတ်သုံးရတာ။ နေရာဒေသ နိုင်ငံ ဆိုတဲ့ စည်းနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ် ဆိုတာကို နားလည်စ ပြုလာတယ်။ ကိုယ်တိုင် လက်ရှိ လွတ်လပ်တဲ့ နေရာမှာ နေထိုင်နေရပြီး အခုအထိ မလွတ်လပ်သေးပါလားဆိုတာကို ... လွတ်လပ်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်မှာ (၇) နှစ်လောက် နေထိုင်ပြီးမှ ပြည်တွင်းက ၈၈ မျိုးဆက်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ မြင်ရတဲ့ အချိန်မှာ ဖျက်ခနဲ မြင်လိုက်မိတယ်။ ရှက်မိပါရဲ့။ လွတ်လပ်တဲ့ နေရာကို ခဏ ရောက်နေပေမယ့် အဲဒီ အချိန် မတိုင်ခင်အထိက တကယ့် လွတ်လပ်မှုကို နားမလည်ခဲ့ဘူး ဆိုတာ ဝန်ခံမိပါတယ်။
မဖြူဖြူသင်းရဲ့ HIV ရောဂါသည်တွေကို ကူညီရေး၊ မစုစုနွေးရဲ့ ရဲရဲတောက် မတရားတာကို ငုံ မခံတဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ပြန်လွတ်လာတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မိသားစုတွေကို အားပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ .. ။ သူတို့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ လုပ်ရပ်တွေက သတင်းတွေထဲကတဆင့် သွေးထဲမှာ အတူ လှည့်ပတ် စီးနေကြတာ။
မြင်နေရတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ မမြင်ရတဲ့ အင်အားနဲ့ လှိုင်းလုံးကြီး တစ်ခု စီးလာနေတယ် ဆိုတာကို။ .. သတိရမိပါရဲ့။
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ရေးတဲ့ လူတွေကလည်း အဲဒီ အားတွေနဲ့ အတူပေါ့ဗျာ။ လိုက်ပြီး စီးမျော နာယူ၊ လေ့လာ မှတ်သားပြီး ပြန်လည် ဝေငှနဲ့။ တော်တော်လေး နွေးထွေးတဲ့ လောကပါပဲ။ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ၊ စာပေ၊ ရသ၊ သုတ၊ ကဗျာ၊ ဟာသ၊ အမှတ်တရ၊ ရောက်တတ်ရာရာ၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး စုံနေတာပါပဲ။ အဲ .. နိုင်ငံရေးနဲ့ သတင်း အတွက်ကတော့ ခပ်ပါးပါးလေးပါပဲ။
မှတ်မိရဲ့ .. ၂၀၀၇ ခုနှစ် အာဇာနည်နေ့မှာ ပို့စ် အသစ် မတင်ဘဲ ဝမ်းနည်းတဲ့ အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုဖို့ကို စင်္ကာပူက ကဒေါင်းညင်သာက စပြီး ဆော်သြတော့ အားလုံး တညီတညာထဲ ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာတွေ၊ ... အဲဒီနေ့ မရောက်ခင် အာဇာနည်နေ့အတွက် ရေးချင်တာလေးတွေ ရင်ထဲကနေ မွေးလာသမျှ အလုအယက် ရေးတင်ခဲ့တာတွေ။ အမှတ်တရ တစ်ခုပါပဲ။
ဟိုး ... အဝေးက အမိနဲ့ အဖကို ... လွမ်း ..
စစ် အစိုးရကို ထောက်ခံတဲ့ အဘိုးနဲ့
အယူအဆမတူကြပဲ ရန် ခဏ ခဏ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေကို ... လွမ်း..
အေးအတူ၊ ပူအမျှ အတူအကွ နေလာခဲ့တဲ့
ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို ... လွမ်း ..
ကျောင်းတုန်းက ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ... လွမ်း..
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် သီချင်း ဖွင့်ခိုင်းလို့ ရတဲ့
လက္ဘရည်ဆိုင်ကို .... လွမ်း
လမ်းမမှာ အော်ဟစ်သီကြွေးဖူးတဲ့ သီချင်းတွေ
ပလက်ဖောင်းပေါ်က တီးဆိုဘက် ဂီတ သူရဲကောင်းတွေကို ... လွမ်း
ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ လက်ကလေးနဲ့
ဘဝရှေ့ရေး တိုင်ပင်ရင်း ကြေမွသွားတဲ့ အိမ်မက်လေးကို ...လွမ်း
တေဖေါ် တေဖက် သူငယ်ချင်းတွေကို .. လွမ်း
ကျောင်းသားဘဝက ကဗျာစာအုပ်လေးကို .... လွမ်း
ကဗျာရေးရင်း အမှိုက်တောင်းထဲ ရောက်သွားရတဲ့
ကျခဲ့ဖူးတဲ့ မျက်ရည်စက်နဲ့ သက်ပြင်းမောတွေကို .. လွမ်း
ကျွန်တော် .. ဒီလိုပဲ ... လွမ်းတာပါပဲ ဗျာ။
စာရေးကောင်းတဲ့ လူတွေ၊ အစ်မ မေငြိမ်း၊ အစ်မ ခင်မင်းဇော်တို့က စလို့၊ ကလူသစ်၊ ကိုပေါ၊ ကိုဈန်၊ မဂျစ်တူး၊ တတ်စလာ၊ ပင့်ဂိုလ်း၊ ကိုသင့်၊ ၊ မသဒ္ဓါ၊ ကဒေါင်း၊ ဘာညာ၊ အဲဒီလူတွေက စလို့ .......... ဖိုးချမ်း၊ လင်းလတ်ကြယ်စင်၊ စမိုင်းမေတို့ အထိ၊ အများကြီးပါပဲ၊ မှတ်မိသလောက် ဖေါ်ပြတာပါ။ (အကုန်ထည့်ရေးရင် နာမည်တွေ တန်းစီနေမှာစိုးလို့။) အခြား သင်ယူစရာ ဘလော့သမားတွေဖြစ်တဲ့ ညီလင်းဆက်၊ ကိုမောင်လှ တို့က စီနီယာတွေလည်း ဖြစ်သလို၊ ပညာယူစရာ နေရာတွေပေါ့။ (ညီလင်းဆက်ဘလော့ထဲက မြန်မာဖောင့် ဘယ်လို သုံးရအောင် လုပ်သလဲဆိုတဲ့ နည်းနဲ့၊ eot ကို ကဒေါင်းဆီက code တွေ ယူပြီး ဒီဘလော့ကို တည်ဆောက်ထားခဲ့တာပါ။ စီဘောက်က နောက်ခံ မိန်းကလေးပုံ(မှတ်မိသူတွေ ရှိမှာပါ) background ထည့်နည်းကို ကိုဖိုးချမ်းဘလော့က လေ့လာပြီး၊ ကိုရန်အောင်ဘလော့က peekabo ကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် peekabo ကို လုပ်ရမှာ ပျင်းတာနဲ့ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။)
စာရှည်သွားရင် ဖတ်ရတာ ပျင်းမှာစိုးလို့ နောက်မှ သတိရမိသည်များ အပိုင်း (၂) ကို ဆက်ရေးတော့မယ်။
(ကျွန်တော် တခါမှ မလုပ်ဖူးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဘလော့သမားတွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ တတ်(tag) ဓလေ့ကို သတိတရ ရှိအောင် ဘလော့ စ ရေးတာနဲ့ ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရတဲ့ သတိရမိသည်များကို ရေးကြအောင် တတ်(tag) လုပ်ဖို့ စာရင်းပြုစုနေပါကြောင်း၊ ကျွန်တော့် အခန်းဆက် သတိရမိသည်များ ပြီးတာနှင့် tag list ကို ကြေငြာကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
Posted by ကိုထိုက် at 01:06 10 comments
Labels: အက်ဆေး, အမှတ်တရ, တွေးမိသော အကြောင်းများ
မတရားတာကို ခေါင်းငုံ မခံတဲ့ စိတ်ဓါတ်နှင့် လုပ်ရပ်
ကိုရင်လေး၂ ပါးကို ဒုတပ်ကြပ်တဦးက ဖြားယောင်းခေါ်ဆောင်သွား
Posted by ကိုထိုက် at 22:456comments
(မေးလ်မှ ရသော စာတစ်ပုဒ်ကို အားလုံး ဖတ်နိုင်စေရန် ပြန်လည် ဝေမျှ လိုက်ပါသည်။ မူရင်းဖေါ်ပြထားသော web site စာမျက်နှာကို မသိ သဖြင့် ဖေါ်ပြပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ သိသူများ ထိုလိပ်စာကို ကျွန်တော့်ထံ အကြောင်းကြားပေးပါက အဆိုပါ ဆိုဒ်သို့ ညွန်းပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။)
ဆယ့်ရှစ်ရာစုက ပေါ်ခဲ့တဲ့ Jonathan Swift ရဲ့ Gulliver's Travels ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုဟာ ကျော်ကြား လူသိများပါတယ်။ ဆရာကြီး မောင်ထင် က `ဂါလီဗာ၏ ခရီးစဉ်´ ဆိုပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်လေ။ ၀တ္ထုထဲမှာ ကမောက်ကမနိုင်လှတဲ့လူတွေအကြောင်း သရော်ထားတာ အလွန်ပီပြင်လှပါတယ်။ အခု နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုမှာတော့ အလားတူ ၀တ္ထုတပုဒ် ပေါ်လို့နေပါပြီ။ နာမည်ကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ Gambari's Travels ပါတဲ့။ `ဂမ်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ်´ပေါ့။ သူသွားတဲ့ နိုင်ငံကတော့ ရွှေဗာရာ မြန်မာဏသီ တိုင်းပြည်ကြီးတဲ့ ခင်ဗျ။
ဟုတ်ပါရဲ့။ ဂမ်ဘာရီ ခမျာ ဒီခရီးကို သွားလေတိုင်း ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေ ဇာတ်လမ်း အတိုအရှည်တွေနဲ့ တိုးလို့ချည်း နေတော့တာကိုး။ ၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာ ပထမဆုံး အခေါက်တုန်းကတော့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူယှဉ်တွဲ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံက ထိပ်တန်းသတင်းဓာတ်ပုံ အဖြစ် ကမ္ဘာကို ပြန့်ခဲ့တယ်လေ။ ၂၀၀၇ ကျပြန်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စာတစောင်ကို ဂမ်ဘာရီက တိတ်တဆိတ် သယ်ဆောင်လာပြီး ထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပုံက တကယ့် သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ပါပဲ။ အဲ ဒီနှစ်ထဲကျတော့ ဂမ်ဘာရီခမျာ အပြင်က လူတွေက ကန့်ကွက်လိုက်, ပြစ်တင်လိုက်၊ ဟိုရောက်တော့လည်း အဆူခံလိုက်ရ အငေါက်ခံလိုက်ရနဲ့ သွားပေါ်အောင်တောင် ဖြဲမပြနိုင်ရှာတော့ပါဘူး။ ဒီတခေါက်မှာတော့ဖြင့်…
သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့က ဂမ်ဘာရီ ရွှေပြည်ကြီးကို ရောက်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာတို့က ဂမ်ဘာရီသည် မည်သူမည်ဝါတို့နှင့် မည်သည့်နေရာတွင် တွေ့လေသတည်း… လို့ သတင်းတွေ ထုတ်ပေးပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဟိုလူ ဒီလူ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါတွေနဲ့ တွေ့တယ်ပဲ ပြောပြော၊ ထမင်းလက်ဆုံစားတယ် ဆိုဆို ဂေါက်သီးပဲ အတူရိုက်ရိုက်၊ အဲဒါတွေကို ဘယ်သူကမှ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့သလား။ တွေ့ပြီးတော့ ဘာပြောသလဲ။ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ တွေ့သလား။ သူကကော ဘာပြောသလဲ။ အဲဒါတွေပါ။
ဂမ်ဘာရီ၏ လက်ထောက်နှစ်ဦး သည်းထိတ်ရင်ဖို ကားပေါ်မှ ဆင်းလာပုံ
(လူကြီး လူကောင်း ပီသစွာ လော်နှင့် အော်ခေါ်နေသောပုံ)
Posted by ကိုထိုက် at 19:377comments
မြန်မာနိုင်ငံသား ၆ ဦးအား ဗီဇာသက်တမ်း တိုးပေးရန် စင်္ကာပူငြင်းပယ်
စနေနေ့၊ သြဂုတ်လ 23 2008 12:02 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ စင်္ကာပူ အစိုးရသည် အကြောင်းတစုံတရာ မပြဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသား ၆ ဦး၏ ဗီဇာသက်တမ်း တိုးပေးရန် လျှောက်ထားမှုကို ငြင်းပယ်လိုက်သည့်အတွက် ၃ ဦးမှာ ဂျူလိုင်လကတည်းက တိုင်းပြည်မှ ထွက်ခွါသွားခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည် ဟု သူတို့ကိုယ် သူတို့ မြန်မာမျိုးချစ်များဟု ခေါ်ဝေါ်သည့် မြန်မာ့အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများက သောကြာနေ့ က ပြောကြားလိုက်ကြပါသည်။
အဆိုပါ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများက သောကြာနေ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတရပ် ကျင်းပပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် စစ်ဆေးရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (ICA) နှင့် လူအင်အား ဝန်ကြီးဌာနတို့က အဆိုပါ ဗီဇာသက်တမ်း တိုးမြှင့်မှုကို အဘယ်ကြောင့် ငြင်းပယ်ရသည်ဆိုသည့် အကြောင်းရင်းကို ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုပါရန် စင်္ကာပူအစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ကြသည်။
“ဤမြန်မာမျိုးချစ် ၆ ဦးသည် စင်္ကာပူ တရားဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ပြီး ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဆိုသည့် အထောက်အထားလဲ ဘာမှမရှိပါ” ဟု မြန်မာမျိုးချစ်များ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သူ ကိုမျိုးမြင့်မောင်က မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဗီဇာသက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းပြချက် ပေးပါရန် သူတို့ စင်္ကာပူအစိုးရကို တောင်းဆိုထားသည်ဟု ပြောသွားပါသည်။
“ဘာအကြောင်းပြချက်မှ ရေရောရာရာ မပေးဘဲ ဗီဇာသက်တမ်း တိုးပေးဘို့ ငြင်းတာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဘဲ” ဟုသူက ဆိုပါသည်။
အလားတူ ပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခြား မြန်မာနိုင်ငံသား အများအပြား ရှိနိုင်သော်လည်း သူတို့သိသည်မှာ ဤ ၆ ဦးသာဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးကို ထောက်ခံသည့် ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဲစခန်း တွင် စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းကို သူတို့ ခံခဲ့ကြရကြောင်းလည်း သူက ဆက်လက် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
“ကျနော်တို့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်း ကျနော်တို့ စိတ်ပူနေရပါတယ်” ဟု ကိုမျိုးမြင့်မောင်က ပြောဆိုသွားပြီး တရားမျှတမှု ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် သူတို့ ရှေ့နေနှင့်အတူ ရင်ဆိုင်သွားရန် ပြင်ဆင် ထားကြောင်းလည်း ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဗီဇာသက်တမ်း တိုးပေးရန် လျှောက်ထားမှုကို ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသူ ၆ ဦး အနက် ၃ ဦးမှာ မောင်စိုးသီဟ၊ ကိုမျိုးထွန်း နှင့် ကိုလှိုင်မိုးတို့ ဖြစ်ပြီး သူတို့သည် ဂျူလိုင်လကုန်နှင့် သြဂုတ်လအစောပိုင်းက စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ခွါသွားခဲ့ကြရသည်ဟု ဆိုပါသည်။
အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ကျင်းပနေချိန် နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ရက် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်က စင်္ကာပူနိုင်ငံ အော်ချတ်လမ်းမ ကြီးပေါ်တွင် မြန်မာမျိုးချစ်များက ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ တရပ်ကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အတုအယောင် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်သည့် ‘ကန့်ကွက်မဲ’ ထည့်ရေး လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဧပြီလနှင့် မေလအတွင်းက ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ၆ ဦး ဗီဇာသက်တမ်း တိုးမြှင့်ရန် လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းကို အဘယ်ကြောင့် ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည် ဆိုသည့် အကြောင်းအချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးသော်လည်း စင်္ကာပူအစိုးရ၏ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံနေခြင်းနှင့် ကြီးကြီးမားမား ပတ်သက်နေဖွယ် ရှိသည်ဟု တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက ယုံကြည်နေကြသည်။
မြန်မာ ၆ ဦး၏ ဗီဇာသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှင်းလင်းဖေါ်ပြပေးရန် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများက စင်္ကာပူအစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ကြပြီး၊ မြန်မာ့တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများအပေါ် မျှမျှတတ တန်းတူ ညီမျှ သဘောထား ဆက်ဆံပါရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
စင်္ကာပူ လူအင်အားဝန်ကြီးဌာနကို မဇ္ဈိမက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် ဤကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစုံတရာ မှတ်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆိုသွားပြီး လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် စစ်ဆေးရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (ICA) ကိုသာ မေးမြန်းပါ ရန် ညွှန်းဆိုပြောကြားသွားခဲ့သည်။
သို့သော် အဆိုပါဌာနသို့ မဇ္ဈိမ က ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာတွင်လည်း “ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကျနော်တို့ မပြောနိုင်ပါဘူး၊ ICA က ဒီပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို မဖြေနိုင်ပါဘူး” ဟုသာ ဖြေကြား ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 09:486comments
(Before reading the story for the head-line, Could you please read and see how Singapore Gov is trying so hard for human Right working group. Does Singapore Gov know the menaing of the word "Human Right"? (To be able to learn the meaning of human right read in wikipedia .....)
Click here to Read about Singapore Gov is working on Human Right working group)
Led by Singapore's George Yeo, Asean foreign ministers last September "expressed their revulsion to Myanmar Foreign Minister Nyan Win over reports that the demonstrations in Myanmar [were] being suppressed by violent force", and called on the military junta there to "work towardsapeaceful transition to democracy."
Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong had spoken "to his ASEAN counterparts... and [would] be writing to Senior General Than Shwe," the joint Asean statement said . During that period, Singapore was the rotating chair of Asean, and people thought this unusually strong statement wasahopeful sign of where Singapore stood. But was this government, always so boastful of its "integrity", being sincere?
Their core philosophy seems to be: "Autocrats of the world, unite!"
Six Burmese have been thrown out of Singapore in the last month or so when their residency passes were denied renewals. While the immigration office has not provided any explanation for any of these cases -- and the silence itself can be read as sinister -– "they had some commonalities", said Myo Myint Maung atapress conference on 22 August.
The Burmese in Singapore have organised "more than dozen" events in the last few months, from the march along Orchard and Tanglin Roads during the Asean summit held in Singapore last November, to petition signing against the sham referendum, to prayer vigils for those slain in the streets of Rangoon, said Myo. All have been peaceful, but they have also beenareflection of the deep anger felt by Burmese over the vileness of the military regime.
His student pass expiring upon graduation, he applied foraLong Term Social Visit Pass, to look forajob. This should be routine, and "normally, people on Long term Social Visit Passes can stay for6months or more to seek employment," said Myo. But in Soe Thiha's case, the government rejected his application altogether, giving no reason for its decision.
Simultaneous with these events, the young man's job search had just about found success. Hai Yong Engineering was prepared to give him his first job and the company promptly filed an electronic application for an Employment Pass for him. Without any visa at all, however, Soe Thiha had to leave Singapore. Hai Yong's application for an Employment Pass for him is still in limbo three weeks later.
Myo Myint Maung provided more details of2other cases at the press conference, which you can glean from his press release, archived as Burmese citizens denied renewal of visas in Singapore.
Singapore still trying to "recruit" talent
"They asked me: 'Who is the leader of the OBP? How many members do you have? Who are they? What are their names? Where do you usually gather for meetings?' And they also asked about my close friends."
At one point, they asked him if he would inform them in advance of any activities by the OBP. It's not clear (to me at least) what answer he gave them, but the more important point, as you can see, is what our government agents are up to.
Thu Yein Win had in March this year helped organiseapetition against the junta's referendum on their extremely undemocratic new constitution. While doing so, his particulars were recorded by some officers, and he was subsequently summoned toapolice station for investigations.
The number of Burmese whose particulars have been recorded by the police for participating in various activities is unknown. "Perhaps 50," was Myo Myint Maung's best guess. But going by these examples, all of them may well be expecting the worst.
It's not easy to find another country to take them. Do they have to return to Burma? Chasing them out of Singapore "may put them into physical danger of the violence that the Singapore government condemned [last year]," said Myo Myint Maung.
Yawning Bread isacitizen of Singapore. I don't have to be diplomatic. Let me be blunt: For all practical purposes, these are deportations. By putting their lives at risk, the Singapore government is as callous as the junta when they blocked foreign aid to Cyclone Nargis victims. By penalising anyone who has spoken out against generals, the Singapore government is aiding and abetting those generals in their continuing crime against humanity.
Not only is this deportation policy morally wrong -- shockingly, revoltingly wrong -- but fromaself-interest perspective, it is unbelievably stupid.
Do we think the military regime will last forever? Impossible. One day, it will fall and these young men and women whom we antagonise today will quite possibly be part of the new government. How can it serve Singapore's interest to be on the wrong side of history?
Spoke person's comment
Posted by ကိုထိုက် at 09:08 13 comments
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ချုပ်
yannaing (usob) - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: yannaing (usob)
Posted by ကိုထိုက် at 17:466comments
Posted by ကိုထိုက် at 17:114comments
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်၊ ဒီအချိန်၊ ဒီည
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်၊ ... ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လရဲ့ ၂၁ ရက် ည၊ ၂၂ ရက်ကို အကူးမှာ လူတစ်စုကို လူမိုက် တဖွဲ့က အကျည်းတန်စွာ လက်နက်အားကိုးနဲ့ အဓမ္မဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဟာ မြန်မာ့ သမိုင်းအတွက် မေ့မရတဲ့ ရက်စွဲ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လာရောက် အနိုင်ကျင့် ရမ်းကား ဖမ်းဆီးသူများကတော့ ရဲချုပ် ခင်ရီရဲ့ လက်အောက်က ဒုရဲအုပ် အောင်မြင့် ဆိုတဲ့ လူပါဝင်တဲ့ လူရမ်းကား တစ်စုသာဖြစ်ပါတယ်။ ထို လူများဟာ မိမိကိုယ်ကို ဝန်ထမ်းလို့ နာမည်ခံထားပေမယ့် ပြန်ပေးသမားများ လုပ်ရပ်အတိုင်း လူတစ်ယောက်ကို ဖမ်းရာမှာ ဖမ်းဝရမ်း မပါ၊ တိကျတဲ့ အကြောင်းပြချက် မပါဘဲ အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ လူမိုက်ဂိုဏ်းသားများသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ယခုဆို ပြန်ပေးဆွဲခံရသော တိုင်းပြည်သားကောင်းများကတော့ ယခုအခါ လူသူ မျက်ကွယ်ရောက်နေတာ တနှစ် တင်းတင်းပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် အဲဒီညမှာ မတရားပြုကျင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ တိုင်းပြည်သားကောင်းများရဲ့ နာမည်များကို အားလုံး ပြန်လည် မှတ်မိနိုင်အောင် ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
ကိုအံဘွယ်ကျော်ရဲ့ မိခင် ဒေါ်တင်တင်ဝင်းနှင့် အမေးအဖြေ လုပ်ခဲ့သော အသံဖိုင်ကိုလည်း ပြန်လည်မှတ်မိစေရန်နှင့် ထိုရက်က မတရား ပြုကျင့်မှုများကို သက်သေအဖြစ် အောက်တွင် နားထောင် ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
မပြောရဲဘူးလား .. မရိုးသားလို့ပေါ့၊ မမှန်ကန်လို့ပေါ့ ...
၆။ ကိုကျော်မင်းယု (ကိုဂျင်မီ)၊
၈။ ကိုကျော်ကျော်ထွေး (ကိုမာကီး)၊
တိုင်းပြည်ရဲ့ သူရဲကောင်း အာဇာနည်များ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်လာနိုင်ရေးမှာ မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော အဓိကကျသည့် အဆင့် တစ်ဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ မတရား အကျဉ်းကျခံနေရသော အဆိုပါ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ မလွတ်မြောက်မခြင်း မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေး မရနိုင်တာ သေချာသော ငြင်းမရသည့် အချက် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ပြန်ပေးဆွဲ အဖွဲ့ ဖြစ်သည့် နအဖတွင် တောင်းဆိုနေသည်ထက် သူတို့ မလွှတ်လျှင် မဖြစ်သော အခြေအနေသို့ ရအောင် ပြုလုပ်ရန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါသည် ခင်ဗျာ။
Posted by ကိုထိုက် at 20:075comments
Why is the United Nations Organization existed in the world?
Is there any problem that has actually been sorted by UN?
Burma, Tibet, Iraq War, Sudan Darfur, ... Now Georgia?
If there is no mistake, there are multi-million us dollars has been used to run UN organization in every month. Does it worth to use such large amount of money? Shouldn't we use this money for global warming effect instead of UN to run itself?
Why should we spend Mr Gambari air tickets to Burma for suchaworthless trip, Shouldn't we use this money for cyclone victims in Burma or use one year education for orphan child?
If you are notapart of solution, then you areapart of Problem.
Does Mr Gambari isapart of solution for Burma?
If not ... What will he be?
Posted by ကိုထိုက် at 12:55 13 comments
Posted by ကိုထိုက် at 23:155comments
စစ်သားဟောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အတွေး
ကျနော်ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ဗွီစီဒီလေးတစ်ချပ်လာပေးပြီး ကော်ပီကူးပေးပါဆိုလို့ ကူပေးလိုက်တယ်၊ ကျနော်က ဘာစီဒီလည်း ဆိုတော့ အစ်ကိုလည်းကြည့်ပါဆိုလို့ ကူးပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်၊ အားလားလား…. ငပွေးတို့ရဲ့ဘိုးတော်ချုပ် စောဘိုမြရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို ရိုက်ထားတဲ့ အခွေပေါ့။ တစ်ချိန်က ကျနော်ရဲ့ ရန်သူတော်ကြီး ၊ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်၊ လှံစွပ်နဲ့ထိုးလိုထိုး၊ တပည့်တပန်းတွေကို မြန်မာပြည်အနှံ့မိုင်းတွေထောင် ၊ ဗုံးတွေခွဲခိုင်း တဲ့ အမိန့်ရှင် စောဘိုမြ … ခုတော့ မရဏမင်းကခေါ်သွားပြီပေါ့၊ ကျနော်က စစ်သားလုပ်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့ အတွေးထဲမှာ ကျနော့်ရဲ့ ရန်သူတော်ဟောင်းကြီးတစ်ယောက် ဇီဝိန်ကြွေသွားပြီ ၊ ငါတို့နဲ့သေနတ်ပစ်တမ်းကစားခဲ့တဲ့ ကစားဖော်တစ်ယောက်ကြွသွားပြီပေါ့၊ ဒီလောက်ပဲတွေးပြီး ဆက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ အတွေးနယ်ချဲ့မိတယ်။
နောက်ဆုံးထိတွေ့ခဲ့တဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ပွဲဆိုရင် ဘိုကလေးဘက် စိမ့်ဝင်နေပြီ၊ အဲဒီတုန်းက အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ တိုင်းမှူးက ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်၊ ဘယ်လောက်အထိနှိပ်ကွပ်ခဲ့သလဲဆို လေတပ်က ရဟတ်ယာဉ် ၂စီးကို ဦးစီးချုပ်စီကနေ တောင်းယူပြီး လယ်ကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ သောင်းကျန်းသူနဲ့ ဆက်စပ်မယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကို လက်တည့်စမ်းခဲ့တယ်။ တပ်ချုပ်ကလည်း ဘာကြောင့်ပေးသုံးခဲ့သလဲဆိုရင် ၀ါဆောစာချုပ်ဖျက်ပြီး ဘ၀ပျက်ကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေထဲက ပိုလန်နဲ့ ရုရှ က မြန်မာပြည်ကို ဆန်နဲ့လဲတန်လဲ၊ ဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းလိုရောင်း လုပ်ထားတဲ့ မီ-၂ နဲ့ ဆူဂေါ ရဟတ်ယာဉ်တွေကလည်း ၀ယ်ထားပြီး မစမ်းရသေးခင် အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ အချို့ရွာသားတွေ သေသာသေသွားတယ်၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ စောဘိုမြရဲ့တပည့် ဟုတ် မဟုတ်တောင် မသိသွားရှာဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကေအင်ယူကစပြီး စိမ့်ဝင်ကာစရှိသေးတာ တစ်ကြောင်း၊ စည်းရုံးးရေးကာလ ဖြစ်နေတာတစ်ကြောင်း၊ မိုးတွင်းကာလ၀င်သွားတာ တစ်ကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့ အခြေခံစစ်သင်တန်းက မစရသေးတာတစ်ကြောင်း၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အရှုံးနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေ (နတခ) မှာ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားတဲ့ရန်သူကို တွေ့လိုက်ရတော့ တိုင်းမှူးပြာယာခတ်ပြီး ဆော်တော့တာပေါ့၊ သူကိုယ်တိုင် ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်တက်၊ လယ်တဲတွေ့ရင် အောက်ကိုဝိုင်းခိုင်းထားပြီး အပေါ်က ရော့ကက်ခ်နဲ့ပစ်တယ်။ ထွက်ပြေးလာတဲ့ အမာခံ (ရွာသားနဲ့သောင်းကျန်းသူခွဲမရရင်သုံးတဲ့ သတ်မှတ်ချက်) ကိုဖမ်းတယ်၊ တိုင်းမှူး အမိန့် ပေးတာက (ငါအသံမကြားချင်ဘူးတဲ့) ဘာလုပ်လိုက်တယ်ထင်သလဲ… ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ ရိုက်သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကို ပြန်ကြည့်ရင် မိုက်တန်စန် နဲ့ မူးနေတဲ့ဆိုက်ကားသမား ထိုးသလိုပါပဲ။ အာပီဂျီလက်ထဲမှာရှိပြီး မပစ်တတ်သေးတဲ့ အမာခံဟာ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးအောက်မှာ အသက်ပျောက်သွားရရှာတယ်၊
အဲဒီ့တိုက်ပွဲအပြီးမှာ တိုင်းမှူးလည်း လောကီသားပဲ၊ ဘာရမလဲ၊ ယတြာချေတာပေါ့…
နတခ ၀န်းထဲမှာ ကိုးလံပြည့်စေတီကို ကိုးရက်နဲ့အပြီးတည်တော့တာပဲ။ ရှိသမျှလိုင်းထဲက မိန်းမရော ကလေးပါ အိမ်ထောင်ဦးစီး စစ်သားကြီးရဲ့ ကျွန်ဝယ်ရာအဆစ်ပါဇာတ်ကို ၀င်ကခဲ့ရတယ်။ တပ်ချုပ်ကြီးကလည်း မြှောက်စားပါတယ်။ စစ်ရေးချုပ်ရာထူးပေး၊ စစ်ရုံးခေါ်ထား၊ ပြီးတော့ လယ်ဆည် ၀န်ကြီးပေးပြီး ဆက်တိုက်မြှောက်စားလိုက်တာ၊ နောက်ဆုံး ၀န်ကြီး 17 ယောက်ကိုဖြုတ်တဲ့အထဲထည့်လိုက်တဲ့အထိပဲ၊ ထွန်းကြည် ၊ ကျော်ဘ ၊ မောင်လှ သိန်းဝင်း ၊ စိန်အောင် ၊ ဖေသိန်း ၊ မျိုးညွန့် စတဲ့ စီနီယာ န၀တ သောက်တလွဲအုပ်စုဝင်တွေကို လာဘ်စားမှုနဲ့ ဖမ်းစစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းလိုက်တာနေစရာအိမ်တောင် ဘုံပျောက် သွားတဲ့အထိ ဂျုနီယာန၀တက သူကောင်းပြုလိုက်တာ မရှုမလှခံလိုက်ရတယ်။ သူများကိုသတ်ခဲ့တဲ့လူ၊ ဘုရားတည်တာတောင် Force Labor သုံးခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ် တစ်ယောက်၊ ဘယ်လိုလဲ၊ ဘ၀တောင်မကူးလိုက်ပါလား၊ ၀ဋ်ကြွေးက ကြီးလိုက်တဲ့အမျိုး…..
တွေးရင်းနဲ့ စောဘိုမြ အခွေကိုဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်၊ တောထဲမှာ လုပ်တဲ့ဈာပန၊ ငိုတဲ့သူတွေကငိုကြ၊ တော်တော်များများရဲ့မျက်နှာက ၀မ်းနည်းနေကြတဲ့မျက်နှာတွေ၊ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် လာကန်တော့ကြတယ် ၊ နောက်ဆုံးတော့ ကေအင်ယူ စစ်အခမ်းအနားနဲ့ ယူနီဖေါင်းအပြည့်အစုံဝတ်ပြီး နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပို့ကြတယ်။ စထွက်တဲ့နေရာကနေ နောက်ဆုံးသင်္ဂြုလ်တဲ့နေရာအထိက တော်တော်ဝေးတယ်။ ထမ်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် လိုက်ပို့ကြတဲ့ပရိတ်သတ်က ငိုလို့ပေါ့၊
အဲ့ဒီမှာ ကျနော်ရဲ့အတွေးတစ်ခုက ဒိန်းကနဲဝင်လာတယ်။ ဒီလူတွေဟာ တကယ်ငိုကြတာလား၊ မကောင်းတတ်လို့ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် ငိုကြတာလားဆိုတာ။ အခွေကို ပြန်ရစ်ပြီး ငိုကြတဲ့သူတွေမျက်နှာကို အဓိပါယ်ဖွင့်ကြည့်မိတယ်။ တမင်ဖန်တီးပြီး လန်ကျုပ်ငိုတာ မဟုတ်ဘူး ၊ တကယ် ၀မ်းနည်းမှုနဲ့ ငိုတဲ့မျက်နှာဆိုတာ ပေါ်လွင်လာတယ်။ သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဆိုလည်း ဒီလောက်များမှာမဟုတ်ပါဘူး၊
သြော်.. ဒါတွေက သူ့ရဲ့ပြည်သူတွေ (သူ့ကိုချစ်တဲ့ သူ့ပြည်သူတွေ) ဆိုတာ သဘောပေါက်လာတယ်။ နှိုင်းယှဉ်ပြီးတွေးစရာက အသက်လည်းကြီးနေပြီ ၊ အနားလည်း ယူသင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ တပ်ချုပ်ကြီး အတွက်ပါ။ ကဲဗျာ…. တပ်ချုပ်ကြီး သေသွားရင် ခင်ဗျားငိုမှာလား … မေးစရာမလိုတဲ့ မေးခွန်းကိုမေးလို့ဆိုပြီး ကျနော့်ကို မဆဲနဲ့လေဗျာ၊ ခင်ဗျားလည်း ပြည်သူတစ်ဦးမဟုတ်လား… တောထဲမှာဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရ ရဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်သေတာ တောင် သူ့လူတွေ ငိုကြသေးတာပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့က မြို့ပေါ်မှာ ဖွဲ့ထားတဲ့ အစိုးရ ရဲ့ လူတွေလေ၊ ပိုပြီးမငိုသင့်ဘူးလား… ဟုတ်တယ်ဗျာ… တပ်ချုပ်ကြီးအတွက်ကို စိတ်ကူးနဲ့တောင် ၀မ်းနည်းလို့မရဘူး၊ 55 သန်းသောပြည်သူတွေထဲက 2% လောက်တောင် သူ့ဘက်ကမကျိန်းသေဘူး၊ မြန်မြန်သေပါစေလို့ဆုတောင်းနေကြပြီ၊ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ကြီးသူကိုရိုသေတယ်ဆိုတဲ့ ဂါရ၀တရား ၊ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့သူကို စိတ်ထဲကနေတောင် မပြစ်မှားကြတဲ့သူတွေ၊ အခုဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီလဲ.. ပြောရရင် အရမ်းအမျိုးချစ်တတ်တဲ့လူမျိုးဗျ ကိုယ့်ဆွေမျိုးအရင်းမဟုတ်ရင်တောင်မြန်မာဆိုတဲ့အသံကြားတာနဲ့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မွန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရှမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကစည်းရုံးပြီးသားပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အောက်ကျမခံခဲ့တဲ့စိတ်ဓါတ်အရမ်းကြီးတဲ့လူမျိုးမှပဲ မင်းဆိုးမင်းယုတ်တွေအုပ်ချုပ်တာ နှစ်ရှည်လများခံခဲ့ရတယ်။ သီးခံခြင်း၊ ရောင့်ရဲခြင်းတွေနဲ့ စောင်းဆိုင်းခြင်းတွေအောက်မှာ လူစဉ်မမှီတဲ့လူ့ဘ၀ကို ဖြစ်သလိုတည်ဆောက်နေကြရတယ်၊ စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်မှု တာဝန်ယူပြီးမှ လူတွေက ပိုပြီးဆင်းရဲတွင်းနက်လာတယ်၊ ပညာပိုပြီးမဲ့လာတယ်။ ၀မ်းရေးကို ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ရင်းပြီးဖြေရှင်းနေကြရတယ်၊ ဒီလိုအချိန်မှာ ထွက်ပေါက်အမျိုးမျိုးကို စဉ်းစားကြရင်း စစ်အာဏာရှင်တွေကို ဆုံးမနိုင်မယ့် နည်းအားလုံးကိုတွေးကြတယ် UN တပ်ကိုမျှော်မိတာ၊ နိုင်ငံစုံတပ်ကိုမျှော်မိတာ၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ လိုအပ်မှုတစ်ခုက တောင်းဆိုလို့ဖြစ်လာကြတာ၊ ပြည်သူ တွေက လောဘတကြီးနဲ့ အနောက်မျှော်ကြတာမဟုတ် ပါဘူး ၊
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ သံဃာတော်တွေကို ရိုက်တယ် ၊ သတ်တယ် ။
ပြည်သူတွေခေါင်းမထောင်နိုင်အောင် နှိပ်ကွပ်တယ်။ မထင်ရတဲ့ ရက်စက်ခြင်းတွေနဲ့ အာဏာကိုမြဲအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ စောဘိုမြက သတ်လို့မရလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် မသတ်ချင်လို့ပဲလားတော့မသိ၊ လက်နက်မဲ့ ဘုန်းကြီးကိုတော့ သေနတ်နဲ့မပစ်ခဲ့ဘူးထင်တယ်၊ ဒါတောင် စောဘိုမြက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ပါ။ ဒီကေဘီအေ နဲ့ တိုက်တုန်းက သေနတ်နဲ့ အပြန်အလှန်တိုက်ကြတာ၊ ဒါမျိုးကိုသဘောကျတယ်။ ခုချိန်ခါ……… သာသနာ့တာဝန် ထမ်းနေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေကို မေးကြည့်ရင်တောင် သေနတ်ချင်းယှဉ်ပစ် မလားဆိုရင်……… ငါးပါးသီလမှာ တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းကို မကျုးလွန်ကြတဲ့ သံဃာတော်တွေတောင် ကျုပ်တို့ရဲ့တပ်ချုပ်ကြီးကို ယှဉ်ပစ်ချင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာလည်း တပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ တောင်းဆိုမှု တွေပဲမဟုတ်လား……………
စောဘိုမြရဲ့ ဈာပန တော့ ပြီးသွားပြီ၊
မပြီးသေးတာက ကျနော့့် အတွေး…………..
တပ်ချုပ်ကြီးသေရင် ဘယ်သူတွေလိုက်ပို့မှာလဲ၊ ဘယ်သူတွေငိုမှာလဲဆိုတာ……
အဲ.. ကျိန်းသေတာကတော့ …. ဟန်ဆောင်ပြီးငိုမယ့် ၊ ဒါမှမဟုတ် အခကြေးငွေနဲ့ငိုမယ့် စွမ်းအားရှင်နဲ့ ကြံ့ဖွတ် တွေရှိနေဦးမှာပါ၊
Posted by ကိုထိုက် at 11:485comments
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း၊ မိုးခေါင်ရေရှားဒေသရဲ့ ဝေးလံလှတဲ့တစ်နေရာ၊ တောင်သာမြို့နယ်ထဲက”ဝဲလောင်ဆိုတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာကနေ၊ ဒီဇာတ်လမ်း စ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဒေသမှာနေထိုင်သူ အများစုဟာ လယ်သမားတွေဖြစ်ပေမယ့်၊ မိုးခေါင်ရေရှား မြေဆီသြဇာ ညံ့ဖျင်းတဲ့အရပ်မှာ အများစုဟာ၊ ရပ်တည်နိုင်စွမ်း မရှိကြရှာပါဘူး။ သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့သွားရောက်ပြီး၊ ရွေှ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအဖြစ် ဘဝကိုရပ်တည်ကြရပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် မြန်မာပြည်ရ့ အိမ်ထောင်စု အတော်များများမှာ၊ မရှိမဖြစ်ကူညီနေကြရတဲ့ အိမ်ဖော်အများစုဟာလည်း၊ အဲ့ဒီ တောင်သာနယ်တဝိုက်ကနေ လာရောက် လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေများပါတယ်။ အဲ့ဒီ လိုဘဝရပ်တည်မှု ခက်ခဲတဲ့ ဒေသတစ်ခုရဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာကနေ၊ မကြာခင်မှာ မြန်မာပြည် သမ္မတဖြစ်မယ့် လူတစ်ယောက် ပေါ်ပေါက်လာဖို့ မဝေးတော့ပါဘူး။ ဝဲလောင်သား တစ်ယောက်ကတော့ဖြင့် ကြီးမားလှတဲ့ လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုတွေနဲ့ မဝေးလှတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
ဦးအောင်သောင်းကို၊ ဝဲလောင်ရွာမှာမွေးပါတယ်။ စစ်တပ်ထဲမှာ ၊ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ မကွေးတိုင်း၊ တဝကဥက္ကဌဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မကွေးတိုင်းဟာ အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ တိုက်ရိုက် ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ ရှိခဲ့ပြီး၊ တိုင်းမှူးကြီး-ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်ဟာ၊ ဦးအောင်သောင်းရဲ့ ဆရာရင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်ဟာ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘဝနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဖြစ်လာချိန်မှာ သူရဲ့ယုံကြည်လှစွာသော တပည့်ကြီး ဦးအောင်သောင်းဟာ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးဘဝနဲ့ ဆရာ့အပါးမှာ တဖဝါးမှမခွာဘဲ လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်ကစပြီး ဦးအောင်သောင်းဟာ သူ့ဘဝရှေ့ရေးကို မျှော်တွေး ပြင်ဆင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ သူရဲ့သား'နေအောင်'ဟာ၊ အဖေရဲ့အရှိန်အဝါကိုသုံးပြီး၊ စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းတွေ စတင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဖရိကတိုက်ကို ဆန်ရောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာ၊ ကြားလူအဖြစ် ဝင်ရောက်အမြတ်ထုတ်ပြီး၊ စတင် ချမ်းသာလာပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်းဟာလဲ၊ ချမ်းသာခြင်းနဲ့ အာဏာရဲ့အရသာကို၊ စတင်တွေ့ရှိလာပါပြီ။ အဲဒီ့မှာဘဲ၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲလှတ ဦးအောင်သောင်းဟာ သူ့ကျေးဇူးရှင် ဆရာအရင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်ကို စတင် သစ္စာဖောက်တော့တာပါဘဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များနဲ့တကွ လာဘ်ယူမှုများကို၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်းကို ယုံကြည်မိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟာ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းကြည်ကို ရာထူးမှဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်၊ စားဖို့ဝါးဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ ဦးအောင်သောင်းကိုတော့ သစ္စာဖောက်မှု ဆုလာဘ်အဖြစ်စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာနကို အပိုင် ပေးသနားခဲ့ပါတယ်။ စက်မှု(၁)ဝန်ကြီးဘဝမှာ ဦးအောင်သောင်းနဲ့ မိသားစုဟာ၊ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ထောင်ချီ ချမ်းသာတဲ့ဘဝကို တက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့သား'နေအောင်'ဟာ၊ အဖေရဲ့အရှိန်အဝါကိုသုံးပြီး၊ 'အောင်ရီဖြိုး' ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခါ၊ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို တရားသောနည်း၊ မတရားသောနည်း၊ နည်းလမ်းပေါင်း များစွာသုံးပြီး၊ ရှာဖွေချမ်းသာလာပါတယ်။
လောဘကြီးလှတဲ့ ဦးအောင်သောင်းဟာ ဒီလောက် ချမ်းသာယုံနဲ့တော့၊ မကျေနပ်နိုင်သေးပါဘူး။ အာဏာအရှိဆုံး၊ အချမ်းသာဆုံး၊ ဖြစ်လိုလှတဲ့ ဦးအောင်သောင်းဟာ၊ သူ့ရဲ သားတစ်ယောက်ကို နည်းပေး၊ လမ်းပြလုပ်ပြီး 'နန္ဒာအေး'ကို၊ ရအောင် ယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ နန္ဒာအေးဆိုတာ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဒုတိယအာဏာအရှိဆုံး၊ ဒုတိယ - ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးပါ။နန္ဒာအေးဟာ“Queen Star”ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီထောင်ထားပြီး ကွန်ပျူတာ အပိုပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို အဖေအရှိန်အဝါနဲ့ တင်သွင်း ရောင်းချနေသူပါ။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးရဲ့ သမီးကို အရယူပြီး မောင်အေးကို ဆွေမျိုးတော်လိုက်တဲ့ ဦးအောင်သောင်းရဲ့ အစီအစဉ်ကတော့၊ တကယ့် မဟာအကြံအစည်ကြီးပါဘဲ။ မောင်အေးဟာ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွါးရေးကို ချုပ်ကိုင် ထားသူလဲဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်းမိသားစုနဲ့ အောင်ရီဖြိုး ကုမ္ပဏီတို့ဟာ၊ နိုင်ငံ့စီးပွါးရေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး၊ အခွင့်ထူးခံဘဝနဲ့ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ၊ ငါ့ဘဏ္ဌာလုပ်ပြီး ကြီးပွါးချင်တိုင်း၊ ကြီးပွါးတော့တာပါဘဲ။
ကလိန်ကကျစ်၊ လိမ်လည် လှည့်ဖြားမှုတွေကလဲ၊ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ပါ။ ဥပမာဆိုရင် စက်ပစ္စည်း အစုတ်အဟောင်းတွေကို နိုင်ငံတော်က အသစ်စက်စက် ဈေးပေးပြီးသွင်းရတယ်။
ဆိပ်ကမ်းတို့ ၊လေဆိပ်တို့မှာလဲူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်သူမှ မစစ်ဆေးရဲကြဘူး။ သူတို့က ဥပဒေရဲ့ အပေါ်မှာရှိတယ်လေ။ အစုတ်ဈေးနဲ့ဝယ်၊ အသစ်ဈေးနဲ့ရောင်း၊ နိုင်ငံတော်ကို အခွန်မဆောင်၊ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို၊ သူတို့အိတ်ထဲ၊ သပိတ်ဝင် အိတ်ဝင် ထည့်နေတာပါ။
နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှ၊ လက်မှတ်ထိုးခ၊ ကော်မရှင် ရသမျှအားလုံးဟာ၊ စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ မိသားစုဘဏ် စာရင်းထဲ ရောက်တာပါဘဲ။ အောင်ရီဖြိုးကုမ္ပဏီဟာ၊ စင်ကာပူမှာ လူမသိအောင် 'IGE' ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကို၊ ဖွင့်ထားပါတယ်။
၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာလ၊ သံဃာသတ်ပွဲကြီး အပြီးမှာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ အပေါင်းအပါများရဲ့ ဘဏ်စာရင်းတွေ ပိတ်မှာကို ကြိုသိခဲ့တဲ့ ဦးအောင်သောင်း မိသားစုဟာ၊ စင်ကာပူက ပိုက်ဆံတွေကို ကြိုိတင် ထုတ်ယူပြီး၊ မြန်မာပြည်ကို ပြန်သယ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရတဲ့ မိသားစုဖြစ်လေတော့၊ လေယာဉ်တွေ၊ လေဆိပ်တွေမှာ၊ ဘာပြဿနာမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မှောင်ခိုဈေး ငွေလဲနှုန်းမှာတော့၊ ၁ဝ ရက် အတွင်း၊ တစ်ဒေါ်လာကို ၊ကျပ် ၁၅ဝ လောက် ကွာဟချက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ထဲမှာ ဒေါ်လာတွေ သန်းချီရှိနေတော့၊ အိမ်ခြံမြေတွေကို အကောင်းဆုံး နေရာတွေမှာ ဝယ်ယူစုဆောင်းကြပါတယ်။
အင်းယားကန်စောင်း၊ ပြည်လမ်းပေါ်ကနေ ဝင်ရတဲ့ နေရာက မြေနဲ့အိမ်ကိှု့ US $ ၄ သန်းနဲ့ ဝယ်ခဲ့တာ မကြာသေးပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ နာမည်မခံချင်လို့၊ တပည့်သားမြေး၊ သစ္စာတော်ခံတွေ နာမည်နဲ့ ဝယ်တာတွေလည်း၊ မရေမတွက်နိုင်ပါဘူး။
စက်မှု(၁) လက်အောက်မှာ ရှိရှိသမျှ စက်ရုံတွေအားလုံး ၊အသစ်၊ အဟောင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်တာ အများစုဟာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ လုပ်နေတာပါ။ အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလိုပဲ အဟောင်းကို အသစ်ဈေးနဲ့ရောင်း၊ ဈေးအပေါဆုံးကို အများဆုံးဈေးတင် လုပ်တာတွေဟာ နောက်ဆုံးတော့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ နိုင်ငံတော်မှာဘဲ၊ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ရတာပါ။ စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်က ဌာနတွေ၊ စက်ရုံတွေဟာ၊ ဘာမှ မပြောရဲကြပါဘူး။ စတပ်ကတည်းက၊ မလည်တဲ့စက်၊ လည်ပြီးတာနဲ့ရပ်တဲ့ စက်တွေဟာ စက်မှု (၁) မှာများမှများပါဘဲ။ ဥပမာ 'သာပေါင်း' ကပျော့ဖတ်စက်ရုံဟာ အမြဲလိုလို ရပ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် အနီးတဝိုက်က ဝါးတောတွေကတော့၊ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းကုန်ပါပြီ။ စက်ရုံကနေ ထွက်တဲ့ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းတွေကလည်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းက ရေနေ သတ္တဝါတွေရဲ့ ဘဝကိုမြန်မြန် နိဂုံးချုပ်ပေးနေပါတယ်။
အနီးပတ်ဝန်းကျင်က ရွာသူရွာသားတွေမှာလည်း၊ ဓါတုအဆိပ်သင့်ရသလို၊ လုပ်ကိုင် စားသောက်ရတာလည်း၊ ကျပ်တည်းလာပါတယ်။ ဖမ်းစရာငါးမရှိ၊ ခူးစရာဝါး(မျှစ်)မရှိ၊ လယ်တွေမှာ ဓါတုအဆိပ်သင့်၊ စက်မှု (၁) လက်အောက်က၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ (၅ဝ) ကျော်ဟာ နှစ်စဉ်ရှုံးပြီး ကြွေးတင်နေပေမဲ့၊ ဦးအောင်သောင်းနဲ့ မိသားစုကတော့၊ ထားစရာမရှိအောင် ချမ်းသာနေပါတယ်။
တရုတ်ပြည်နဲ့ မြန်မာ စစ်အစိုးရတို့ ပတ်သက်မှုဟာလည်း၊ အလွန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ တကယ်တော့၊ တရုတ်ပြည်ဟာ မြန်မာပြည်ကို အခုလောက် အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံနေစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ လက်လွန်ထားတဲ့ အကြွေးတွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ နောက်အစိုးရများ တက်လာခဲ့ရင်၊ ဆုံးရချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ တရုတ် ကုန်သည်ကြီးများက အစိုးရကို ဖိအားပေးပြီး၊ ထောက်ခံ ခိုင်းနေတာလို့ ယူဆရပါတယ်။
တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့၊ 'ထူး'ထရေးဒင်း၊ အဲပုဂံ၊ ဦးတေဇ၊ စသည်တို့ဟာ နာမည်ကြီးမဲ့သာကြီးနေကြတာ၊ တကယ်တမ်းတော့၊ ဦးအောင်သောင်း မိသားစုချမ်းသာတာရဲ့ အဖျားအနားတောင်၊ မမှီကြပါဘူး။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်း၊ ရေရှည်စီမံကိန်းအပိုင်း၊ အစရှိတာတွေမှာ ဦးအောင်သောင်း မိသားစုဟာ စနစ်တကျရှိလှပါတယ်။ လက်ရှိ ”အဲပုဂံ” ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကြည့်ပြီး၊ ဦးအောင်သောင်း မိသားစုကတော့ ဝမ်းသာနေကြမှာပါပဲ။
ဦးအောင်သောင်းဟာ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးသန်းရွှေရဲ့ မျက်နှာသာပေးမှုကို အခံရဆုံးပါ။ ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းကို၊ စတင်တည်ထောင်သူတွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး တစ်ဦးတည်းသော ၊ဆက်လက်ကျန်ရှိနေဆဲ ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းကို ခုတုံးလုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့နယ်မြေကိုလည်း တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဘဏ္ဍာထဲက၊ ခိုးထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ ချမ်းသာနေတဲ့ ဦးအောင်သောင်းဟာ၊ ဒီငွေတွေကို သုံးပြီးအလှူတွေ၊ ထောက်ပံ့မှုတွေ၊ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးကုတာတွေ လုပ်ပြရင်း၊ ဦးသန်းရွှေကို မျက်နှာလုပ်ပြီး၊ နေရာယူလာပါတယ်။ သူရဲ့ရှေ့ရေးကို မျှော်တွေး တည်ဆောက်လာတဲ့ အုပ်စုဟာလည်း တောင့်တင်းခိုင်မာစွာ ရှိနေပါပြီ။ နိုင်ငံက ခိုးလို့ရတဲ့ငွေတွေကို သုံးပြီး၊ သန်းရွှေကိုဖြုတ်ချပြီး ကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ့် အစီအစဉ်ဟာ တဖြည်းဖြည်း ရုပ်လုံးပေါ်လာနေပါပြီ။ ငါးကြင်းဆီနဲ့၊ ငါးကြင်းကြော်မှာပါ။
ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုကြီးမှာ ဦးအောင်သောင်းဟာ အဓိကကြိုးကိုင်သူပါ။ တကယ့်တကယ်မှာက ၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အားလုံးကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ပေမယ့် ကံကောင်း ထောက်မစွာနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ရာဇဝတ်သားတွေရဲ့ လက်က၊ လက်မတင်လေး လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အံ့သြစရာ ကောင်းလောက်အောင်ဘဲဦးအောင်သောင်းဟာ အများ ပြည်သူမြင်ကွင်းမှာ သိပ်မသိလိုက်ဘဲ၊ သေရွာစံသူ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းသာလျှင် အဓိက တာဝန်ရှိသူအဖြစ်၊ ဓားစာခံဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်မဲ့သူရဲ့ ကလိန်ကကျစ် အရည်အချင်းကိုပြတာပါဘဲ။ ဆရာသမားများရဲ့ ချီးကျူးမှုကို ခံယူပြီး မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုလဲ ဖုံးကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မသက်ဆိုင်သူကိုပါ အပြစ်ရှိအောင် ဆွဲထည့်လိုက်သေးတယ်။
ဦးအောင်သောင်းကတော့ တရုတ်ပြည်ရယ်၊ ဦးသန်းရွှေရယ်၊ အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးရယ် ၊ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့တွေရယ်၊ အားလုံးကို လိုသလို ချယ်လှုယ်ကြိုးကိုင် ကစားနေတာပါ။ အားလုံးဟာ ဦးအောင်သောင်း ဖွင့်ပေးတဲ့ တီးလုံးနဲ့ ကနေကြရတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်တွေပါဘဲ။
၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာလက ငြိမ်းချမ်းစွာ၊ လှည့်လည် မေတ္တာပို့နေတဲ့ သံဃာတော်တွေကို မလိုအပ်ပဲ၊အကြမ်းဖက်၊ နှိမ်နင်း သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုကြီးဟာလည်းဦးအောင်သောင်းရဲ့ တစ်ဦးတည်း ဦးဆောင် ညွှန်ကြားမှုနဲ့ လုပ်ခဲ့တာလို့ လေ့လာသူတွေက မှန်းဆကြပါတယ်။ ကြိုတင်ကြံစည်ပြီး သံဃာတော်တွေကို သတ်ဖြတ်မှုဟာ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဦးသန်းရွှေပဲ တာဝန်ခံရမယ်ဆိုတာကို သိတဲ့ ဦးအောင်သောင်းဟာ၊ တမင်သက်သက် ဦးသန်းရွှေကို၊ အဖတ်ဆယ်မရအောင် လုပ်လိုက်တာပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦးအောင်သောင်းရဲ့၊ ကြိုတင်မြော်မြင်မှု၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုတွေကို တွေ့နိုင်သလို၊ ဦးသန်းရွှေရဲ့တုံးမှု၊ ပေါတာကြီးဖြစ်မှုတို့ကို၊ ရှင်းလင်းစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်းရဲ့ ကြံစည်မှုကြီးဟာ၊ ဆယ်စုနှစ်၊ တစ်ခု ကျော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့၊ ယခုအချိန်ဟာ ငွေကြေးအားဖြင့်၊ အာဏာအားဖြင့် အထွဋ်အထိပ် ရောက်ရှိနေပါပြီ။ သူ့ရဲ့အရေးအကြီးဆုံး မဟာမိတ်အဖြစ်၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးဟာလည်း၊ သူ့ရဲ့ ဆွေမျိုးအဖြစ်၊ ရှိနေပြီဆိုတော့၊ နောက်ဆုံး အဆင့်အာဏာကို လွှဲပြောင်းယူဖို့ဘဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဦးသန်းရွှေမှာလည်း ရွေးစရာ လမ်းသိပ်မရှိတော့ပါဘူး။
ဦးအောင်သောင်း မိသားစုကသူ့ကို၊ ကန်ချမဲ့ရက်ကို စောင့်မျှော်နေရင်း၊ ကျား(အောင်သောင်း)သနားမှ၊နွား(သန်းရွှေ) ချမ်းသာရမယ့်ဘဝကို ဆုတောင်းနေရပါတော့တယ်။
THE ROAD MAP FOR U AUNG THAUNG DYNASTI.
(Story of Future Myanmar President Hopeful)
It was started from very remote village located in unfertile land at dry and drought area of central Burma (Myanmar). Place was called Well-Long village in Taung-Thar township and most of the inhabitants there are struggling farmers and some people unable to survive were moved to work in greener pastures land as immigrant laborers. Even nowaday Burma (Myanmar) still can see the populations of domestic housemaid were mostly from that area as chances to survive in above said land is very much minimal. But today Burmese will haveachance to see the next President of Burma (Myanmar) from that Well-Long village as son of the Well-Long was constructing the clandestine plan to reach the highest level of the country in very near future.
U Aung Thaung was born in Well-Long village and served in the army till he get the rank of colonel then became the chairman of Magway Division Law and Order Restoration Council. His immediate boss at that time was Lt. General Tun Kyi of Central Division Area Commander. When Lt. General Tun Kyi became the Minister for Ministry of Trade, U Aung Thaung became the Deputy Minister. That was the time for him to start building his own Road Map to reach higher position. His son Nay Aung started to do the business with full influence of his father. Selling rice to Africa and Nay Aung act as middle man for smooth transaction .He was getting rich from that and U Aung Thaung started to know the taste of rich and influential. He was very wicked and betrays his master by giving information about Lt. General Tun Kyi’s corruptions to Senior General Than Shwe.
Senior-General Than Shwe did believe U Aung Thaung’s story and fired Lt. General Tun Kyi. U Aung Thaung expected to become the Minister of Trade as he saw many opportunities to benefits within the same ministry but he was rewarded as the Minister in the Ministry of Industry (1), in which, he makes his family to the top billionaire in the world later. His son leads the family business and build up the Aung Yee Phyo Company. It’s make millions of US$ per year in way of performing legal and illegal business.
U Aung Thaung still not satisfies and is trying to becomeabillionaire and powerful person in the country as well thus he tries to find the way and guide one of his son to be married with Nandar Aye, who is the daughter of country’s number two Vice-Senior General Maung Aye [ Vice Chairman of the State Peace and Development Council, Deputy Commander-in-Chief of Defence Services, Commander-in-Chief ( Army ) ]. Nandar Aye herself owns the company in the name of “Queen Star”, which import computers, its accessories and electronic appliances.
The most interesting point of how U Aung Thaung is trying to become rich and powerful guy in the country is his successful plan to get related with Vice-Senior General Maung Aye, isachairman of Trade Council and most influential for procuring all machineries, equipments and spare-parts required for all 32 ministries in the government. U Aung Thaung family and “Aung Yee Phyo” Company are the most privilege and beneficial as they had been build up the empire to monopolize the country’s business as their own. Aung Yee Phyo Company is doing all tricky things while it procure all second hand tools and spare-parts to be imported but the agreements for the official business mention these are said to be genuine. No one at the ports, airports or whatsoever the entry points and check points into the country dare to check. They are really above the law. The worst thing is that they don’t declare anything as they don’t need to pay taxes, which might be for the government budget.
Another benefit comes from the signature bonus from all suppliers and contractors for concerning Ministries. All these go into the foreign account for his family in the name of the company. The Aung Yee Phyo Company tried to stay themselves in low profile abroad by changing the company name to “IGE”, which is registered in Singapore. It was learnt from the recent sanction, which effecting the closure of the Bank account after the Monks uprising in September, the U Aung Thaung family got the news ahead of the action went into place so they withdraw all money in cash and brought back into the country. Because of that the exchange rate of US$ went down abruptly about 150kyats per dollar within 10 days.
They bought the big mansion on the Inya lake water front and entrance can make from Pyay road next to Phi-Lin Thai restaurant. It cost4million US$ and was cleared withinaweek. They keep on buying as they havealot of US$ in hand.
There are many factories (new and renovated) under the Ministry of Industry (1) are being supported by China business groups in many different way. U Aung Thaung is always trying to find the cheap parts which actually mentioned as brand new ones in the document. Inaway that they are doing the benefit most. They get commission and bonus in the percentage which is calculated with the price of brand new. The sufferers are the Ministry and country. Most Ministries and departments have no right to decline for the parts and equipments which all break down easily as they are bad in quality. Among many example, paper pulp mill in Tha-baung, Ayeyarwaddy Division, stopped rapidly. But all bamboo forest disappeared around that area. All wastes products sneaking down from the factory has destroyed the all marine lives and harms the people. Villagers are sufferingalot. There are altogether 50 factories in different sizes under the Ministry of Industry (1). All are in big debt.
China involvement with Junta is intrigued. In fact the China is not in the position for the absolute support but that is good cover story for rather to avoid the big lost of money and investment which are now turn to bad loan and debt of no repayment. China afraid of those debts not pays back to them if in case new government is elected.
Actually, Htoo Trading, Air Bagan and U Tay Za are getting famous and popular in this country and abroad but his business empire is justapeanut if compare with U Aung Thaung family’s own in every sectors such as in capital, asset, investment, involvement and long term plan. Recent hardship for Air Bagan is probably good news for U Aung Thaung family as one of their competitor’s downfall.
U Aung Thaung is among the most favoured by S.G Than Shwe and key person in USDA (Union Solidarity and Development Association) as he had been building his strong hold in there. He has much more resources of his looted money from state to use for organizing the activities such as donations, charities and whatsoever to build up the trust of Than Shwe and clandestinely forming his own group. All his looting from state was used again to take over of the ultimate and absolute power to rule the country. That is in Burmese proverb saying “Fry the carp fish with its own fat”.
U Aung Thaung isamost responsible culprit of De-pe-yin conspiracy. They actually planned to murder all including Daw Aung San Suu Kyi but she was merely escape from the hands of USDA (Union Solidarity and Development Association) criminals byachance of luck. Wonderful thing is that U Aung Thaung can keep away of his involvement from public and only pathetic now deceased General Soe Win becameascapegoat. That is obvious of how the future president hopeful is smartly preserve his reputation but get full blessing of his superior for doing notorious thing.
U Aung Thaung is playing around with China, Than Shwe, USDA( Union Solidarity and Development Association ) and the whole cabinet as look like they all are dancing with the music of whatever U Aung Thaung is playing without noticing they of become as clowns.
The crackdown of Monks Demonstration also was handled by U Aung Thaung single-handedly and political analysis strongly believe that the unnecessary handling of violent attack to cull down the Reverend Monks was deliberately done to discredit the Senior General Than Shwe and thus to lower his reputation and dignity to the lowest level. Don’t forget that Burmese are the very religious Buddhist. We can imagine the shrewdness of U Aung Thaung and motive behind the real scene. From that we can clearly see the Senior General Than Shwe’s stupidity too.
Ever since U Aung Thaung building his empire for almostadecade passed and now isaright time for him as he get all the wealth and political power in hand. He is got the most important ally in military as Vice-Senior General Maung Aye already became his relative and only the final step remain for him is to take over the position of what is now in the hand of Senior General Than Shwe .In this situation, Senior General Than Shwe has not much choice but to wait for the day of take-over from U Aung Thaung Dynasty and pray for the mercy if U Aung Thaung Dynasty grant for him.
Posted by ကိုထိုက် at 05:20 19 comments
စင်္ကာပူ အစိုးရ၏ အကျည်းတန်သော (သို့) သိက္ခာ မရှိသော လုပ်ရပ်
Posted by ကိုထိုက် at 00:10 10 comments
Labels: သတင်း, ကြေငြာစာ